Ikhamera ye-WiFi efihliweyo ye-5 ye-202 ye-USB yeKhamera yetshaja, Ukuchongwa kweMotto, iRekhodi yeLop, Ukutshaja kwefowuni (SPYXNUMX) | Izisombululo ze-OMG
I-SPY202 -I-OMG 4K ye-WiFi yokuHlola efihliweyo ye-USB 5-USB Port Charger Camera, Ukufunyanwa kweMotion, Ukurekhodwa kweLoop, ukutshaja kweFowuni
【Imboniselo ekude engenazintamboIilensi ezingabonakaliyo ezinamacala angama-90 ee-angle zakhiwe kule kamera yetshaja ye-wifi ye-USB. Ungayisebenzisa njengesikhululo sokutshaja sedesktop, kunye nekhamera. I-1080P / 720P / 640P yoSombululo kwiRatio inokuhlengahlengiswa ngesandla ngokwemeko yenethiwekhi yakho. Nje ukuba le khamera engenazingcingo iqhagamshele kwi-wifi yakho, unokujonga lula ikhaya lakho, igumbi lokugcina okanye ivenkile. Ifanelekile ukhuseleko lwasekhaya kunye nantoni na oyikhathaleleyo.
【Isitshixo sokuKhangela iXabisoInkqubo yokufumanisa intshukumo eguqukayo exhotyiswe ngekhamera yetshaja ye-USB. Nje ukuba ubhaqo lwentshukumo lwenziwe, uya kufumana isaziso kwifowuni yakho. Ikwafaka iifoto kwaye igcine kwi-APP yomsebenzisi ngokuzenzekelayo, awuyi kuphoswa ngumzuzu onomdla. Umgama wokuchongwa kwentshukumo ungaya kwi-9.8ft.
【Ukurekhodwa kweMicro SD kunye nokuRekhoda kweLoopIkhamera ixhasa imemori khadi efikelela kuma-64GB (ayifakwanga). Inokusetyenziselwa ukurekhodwa kokufunyanwa kwesindululo, ukurekhodwa kweeyure ezingama-24 kunye nokurekhodwa kwevidiyo okuphelelwa lixesha. Ikwaxhasa ukurekhodwa kweluphu. Xa ikhadi le-SD ligcwele, liya kubhala ngaphezulu eyona fayile indala ngokuzenzekelayo ngeyona intsha. Ngaphezu koko unokujonga ngokuthe ngqo ukurekhoda kwi-APP egcinwe kwikhadi le-sd, ungakhuphi ikhadi le-sd.
【IiZibuko ezininzi ze-USBPort I-5-USB Port ineendibaniselwano ezinkulu ezinokubiza izixhobo ezininzi ze-USB ngaxeshanye ukufezekisa iimfuno zakho zamandla ngesiqinisekiso sokhuseleko. Intambo yamandla ye-4.7 ft yinde ngokwaneleyo ukuvumela itshaja ifikelele ngakumbi. Ayisiyo ikhamera mini kuphela, kodwa nesikhululo sokutshaja esigqibeleleyo.
Ulungiso lwezigqibo: 4k / 1080P / 720P / 640P
Umgangatho wefreyimu: 15fps
INgqumbo Ebonakalayo: isidanga 90
Ukushisa okusebenzayo: -10-60 degree centigrade
Ukutshintshwa kweMotion Detection Camera Ukudubula: Umgca ochanekileyo we-3 wamitha
Uhlobo lweKhadi leMemori: Ikhadi leSD SD
Ubuninzi bememori khadi: 64GB
Ifowuni yeeNkqubo yokuSebenza: IOS / Android
Zingaphi iikhamera zingakwazi ukuxhuma i-APP kwi: 8
Zingaphi iifowuni zinokudibanisa ikhamera ngexesha elifanayo: 4
I-DC yombane ye-USB: 5V
DC Okwangoku ye-USB: 0.5A*1/1.0A*2/2.1A*2
Ubude beCord: 4.7ft
13026 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-8 Namhlanje